I-AC-MB018 yeNdawo yokuSebenza yeNdleko zeSibhedlele seNdleko
Ibhedi yesandla esibhedlele
Ibhedi yesibhedlele eletric
I-Orthopedics ibhedi yokuhamba
Izixhobo zebhedi yesibhedlele
Itroli yokuhamba phambili
Itroli yerekhodi yomonde
Itroli yentsimbi engenasici
Isixhobo steel stainless
Itroli yesixhobo se-ABS
Isinki yokukhuhla yesinyithi engenasici
Ukuhanjiswa kwesigulana iTrley
Itroli yokudlulisa i-Hydraulic
Itroli yokudlulisa ngesandla
Umatshini wokuhambisa umoya
Ezinye iimveliso zoncedo lokuqala
IINDABA / IBlog
Ixesha lenkonzo: iiyure ezingama-24
Min ukuze: 10PCS
Imowudi yentengiso: Ihowuliseyili
Ibhedi yezonyango ethengisa kakhulu ngamaxabiso aphantsi
Umsebenzi omnye wonyango iindleko zefowler zebhedi
Intsimbi | Ukupeyinta
IBaosteel ivela kwi "Fortune" yenkampani ye-Global 500 yenkqubo ye-epoxy yokugquma. Yintsholongwane ngokuchasene novavanyo lwe-ASTM. Ubungqingqwa bokubopha yi-0.12mm, ukukhanya kuku-60 °, kwaye ukutyabeka kunokumelana nefuthe le-50kg.
Iiplastikhi ezinobume bendalo zinokucocwa kubushushu obuyi-100 ° C, ngamandla aqine eVirgin ABS izinto ukuya kuthi ga kwi-30MPa.
Ukunciphisa ukungqubana, okukhuselekileyo kunye nokuqina.
Ikhonkco lesandla elibuyisekayo lihambelana namaxesha ayi-100,000. Isixhobo sokukhusela kakhulu esiya kwenza isandi xa sithambekele kwindawo ephezulu.
Uyilo lwala maxesha, kusetyenziswa ipaneli entsha eyomeleleyo ye-ABS ukunqanda ukuwa. Ukucoca nokufaka kulula. Ubunzima bomnatha budlula i-3.6kg.
Ukunyathela kunye nokwenza iqonga kunomphezulu ogudileyo ngaphandle kwamanqaku e-welding kunye neebhere ezingama-135KG umthwalo. Iqonga elikhethiweyo le-X-ray eguqukayo.
Umgaqo kaloliwe osecaleni
Imizila esecaleni yeAluminiyam, iipali ezi-6, uhlobo lokusonga, kunye nokhuseleko.
Ivili le-5-intshi caster TPR alinawo ukunxiba emva kokuqhuba i-30KM, igcina iqokobhe elilukhuni elijijayo, kwaye lenze yonke ngaphandle kweebholithi. Ukupasa uvavanyo olunamandla: ukuthwala i-120kg ibaleka i-30KM kwaye kudlule imiqobo amaxesha angama-500.
Laser kunqunyulwa amagwegwe amanzi kumacala omabini.
I-SS IV ipali epheleleyo, ethwele i-15kg.
INtloko yeBhodi kunye neBhodi yeenyawo
Impahla ye-PP yeNtloko kunye nebhodi yeenyawo ayinakuze inyibilike nengxolo emva kwensimbi ekhuselekileyo yentsimbi ngokukhawuleza ukwenza pu bed bed convenieritty Intloko enokuchaphazeleka kunye nebhodi ye-fsot ngaba angakhawuleza asuse isilwanyana esivelisayo
I-2-Sectie callapsihig yealuminiyamu ecaleni komgaqo kaloliwe, onokuthi uphakanyiswe kwaye wehliswe ngokubonakalayo kukuqinisekisa ukuba unelungelo lokufumana ilungelo elilodwa lomenzi. okanye gef off ukhuko PP matera, Its smpoeth ithenda kwi profle ngaphandle, kwaye kulula dearn
Iipaneli ezi-4 zetsimbi ezenziwe ngomgubo
Isiseko sebhedi, isakhelo kunye nomlenze zonke zenziwe ngeplate yentsimbi ebandayo kunye neetyhubhu kwaye zigqunywe ngesitshizi se-electrostatic emva kokuphinda kabini phosphatization.
Umgangatho ufikelela kumgangatho wesizwe. Iintloko neenyawo zeebhodi zenziwe ngezinto ze-ABS ezingenisiwe.
Esi sibhedi sesigulana sikunye nebhodi enebhedi yeenxalenye ezi-4.
Inkqubo yesithathu yokusebenza kwe crank.
I-5 "castors (ii-2pcs ezineebhuleki, ii-2pcs ngaphandle kweziqhoboshi okanye ii-4pcs zonke iziqhoboshi okanye isitshixo solawulo oluphakathi), ibisebenza ngokulula, ingenangxolo kwaye ithule.
Intloko kunye nebhodi yeenyawo
IV imingxunya yokuvuza
Ngaphandle L * W * H
2150 * 950 * 500mm
Ngo-1900 * 900mm
Umthwalo wokuSebenza okhuselekileyo
5 "Icala eliphindwe kabini Secure®Castors
Aluminium ingxubevange ecaleni kaloliwe
Ibhedi ye-ABS iphela ngeKhiye ekhuselekileyo
Uqwalaselo lwePole IV
Umsele wamanzi wokuhambisa amanzi
Umatrasi, Phezu kwebhedi itafile, Ngaphandle kwekhabhinethi
Aluminium kwicala kaloliwe
Egqithileyo I-AC-MB016 iBhedi yoNyango yesiBhedlele esiThengisiweyo
Okulandelayo: I-AC-ST002 yezigulana ezolulwa iTroli kwinqwelo
I-AC-EB018Imisebenzi emi-3 yeSibhedlele soMbane
I-AC-MB012 imisebenzi emibini ibhedi yesigulana
AC-ENB001 Nursing ibhedi yombane enemisebenzi emi-3
AC-EB022 Super eliphantsi 3 imisebenzi hospita yombane ...
I-AC-ENB007 Nursing abs yombane imisebenzi 5 yebhedi
I-AC-ENB009 Nursing abs yombane imisebenzi 5 yebhedi
Zhangjiagang Annecy Machinery Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Itroli yoNesi engenazingcingo, Itroli yeLaptop, Itroli yeZonyango, Itroli yesibhedlele, Itroli yoNyango ngeeDraw, Inqwelo yeTyoli yoNyango,